हामीले खाने अण्डा शाकाहार हो कि मांशाहार ? वैज्ञानिक निष्कर्ष यस्तो छ .. - Seven Nepal
बिहिबार, आषाढ २३, २०७९ | Monday, January 7, 2019
हामीले खाने अण्डा शाकाहार हो कि मांशाहार ? वैज्ञानिक निष्कर्ष यस्तो छ ..
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २३, २०७५ समय: ४:११:२७
काठमाडाैँ – हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने अण्डाबारे समाजमा विभिन्न मत सुनिन्छन् । कतिपयले अण्डालाई शाकाहारी भोजन मान्छन् भने कतिले मांशाहार मान्छन् । माछामासु नखाने शाकाहारीहरुले समेत अण्डा खाने गरेको पनि पाइन्छ । तर अर्कोथरीले अण्डा मांशाहारभित्रै पर्ने गरेको तर्क राख्छन् ।
अण्डाको सेतो भागमा प्राणीको कुनै हिस्सा नहुने भएकाले त्यसलाई पूर्णरुपमा शाकाहार मानिएको छ । तर गर्भाधान भई बच्चा बन्न सक्ने अवस्थामा बाहेर अन्यथा अण्डाको पहेँलो भाग पनि शाकाहार नै मानिएको छ । यसर्थ नकोरेलिने बतासे अण्डालाई वैज्ञानिकहरुले शाकाहारी भोजन मानेका छन् ।– एजेन्सी